IJet Lag: Iyintoni kunye nendlela yokuNceda umzimba wakho ukuba uyiKhawuleze | Amadoda aQinisekileyo
UMiguel Serrano | | yokuPhila
Ngaba wakhe wanyanzeleka ukuba ubhabhe uye kwelinye izowuni yexesha, nokuba kukwishishini okanye uyolo? Ke, ngaphandle kwamathandabuzo, unamava esifo esaziwa njengeJet Lag.
Inzondelelo yokwazi elinye ilizwe okanye ukutyelela abantu obathandayo ihlala isindwa uthotho lweziphumo ebezingalindelekanga ezaziwa njengeJet Lag, ethi, ekuhambeni kwakho uhambe, kokukhona iya isiba namandla kwaye ihlala ixesha elide.
1 Iimpawu zeJet Lag
2 Ngaba ungalwa noJet Lag?
2.1 Ngaphambi kwendiza
Iimpawu zeJet Lag
Okokuqala, kubalulekile ukuqonda ukuba kutheni iJet Lag ivela. Wakhe weva ukuba sonke sinewotshi yangaphakathi? Ewe kuyinyani ngokupheleleyo, kwaye loo ndlela, ikwabizwa ngokuba yisingqisho se-circadian, ithatha ixesha ukuziqhelanisa nomda wexesha omtsha. Ngelixa uhlengahlengisa, umzimba uyeka ukusebenza ngokwesiqhelo, njengoko Imisebenzi emininzi yomzimba ixhomekeke kwiwotshi yangaphakathi, ukusuka kwimveliso yehomoni ukuya kumaza engqondo.
Iimeko zeenqwelomoya azincedi ncam ukuba zifike kwindawo entsha kwaye zilungele nawuphi na umceli mngeni.. Uxinzelelo lwehlisa ioksijini egazini kwaye kunokukhokelela ekuphelelweni ngamanzi emzimbeni, ngelixa ukungahambi kakuhle kuhamba negalelo elibi leempawu zejet lag.
Ukuba ubhabha rhoqo, iimpawu zeJet Lag ziya kuba ziqheleke kuwe, nangona zingathandeki kangako. Ukutshintsha izowuni yexesha kunokubangela:
Kodwa ungakhathazeki, njengoko usenokuba uyazi, iJet Lag yeyokwexeshana. Umzimba womntu ngumatshini okrelekrele kakhulu kwaye ugqibela ngokuziqhelanisa nolona tshintsho lwexesha lunokuphazamiseka. Ewe kuyimfuneko ukumnika ixesha kwaye ube nobubele kuye, into esiza kuchaza indlela yokwenza kamva. Kodwa kuthatha ixesha elingakanani ukuba iimpawu ziphele? Ingathatha ukusuka kwiiyure ezingama-24 ukuya kwiveki ukuba umzimba ubuyele esiqhelweni.. Kuxhomekeka kumgama ohanjiweyo kunye nobudala (abantu abadala bathatha ixesha elide ukubuyela kwakhona).
Ngaba ungalwa noJet Lag?
Ngaba ikhona into enokwenziwa ukulwa neJet Lag? Apha siphendula le neminye imibuzo enomdla enokukunceda umelane neempawu zakho, kwaye uzinciphise.
Ngelishwa, akukho lunyango lommangaliso lokususa iJet Lag, kodwa kuya kufuneka ulinde iwotshi yakho yangaphakathi ukungqamanisa neyangaphandle. Nangona kunjalo, ewe kunjalo unokwenza izinto ezilula kwaye zisebenze ukunceda iwotshi yakho yangaphakathi ihlengahlengise ngokukhawuleza kwimeko entsha.
Isicwangciso esiliqili sokulwa neJet Lag kufuneka siqale iintsuku ezininzi ngaphambi kokuya kuhambo lwaselwandle. Ukuba unokwenzeka, ukutshintsha ngokuthe ngcembe ishedyuli yakho yokulala ukuze ilungele ummandla wexesha oya kulo unokunceda kakhulu. Kulula kakhulu: beka ixesha lakho lokulala phezulu okanye ezantsi imizuzu engama-30 yonke imihla.
Ukwenza okufanayo ngokutya, ukuqhubela phambili okanye ukulibaziseka kuxhomekeke kwindawo yakho entsha yexesha, kuya kunceda ukwenza ukubethwa kube lula. Kodwa ngaphezu kwako konke, Qinisekisa ukuba ukutya kwakho kukunika ukutya okuninzi, njengoko umzimba wakho uyakuxabisa ngexesha leJet Lag. Ngokubhekisele ekutyeni, kuyacetyiswa ukuba kuncitshiswe ukuselwa kotywala kunye necaffeine kwiintsuku ezingaphambi nasemva kohambo, njengoko ziphazamisa ubuthongo.
Ekugqibeleni, xa uhleli kwinqwelomoya yenza iiwotshi zakho zibeke uphawu kwindawo oya kuyo kwilizwe. I-Psychology inamandla kwaye eli nyathelo lincinci liyangqina. Ngokukhawuleza uqala ukucinga ngokungathi ukwindawo entsha yexesha, ngokukhawuleza uya kuphila kwiJet Lag, kunye ilindi Ngaphandle kwamathandabuzo baya kukunceda ukuba ubenengqondo. Kodwa lumka, oku kubalulekile: ungaze uyenze ngaphambi kokungena kwinqwelomoya okanye uyakuphosa inqwelomoya.
Siyavuyisana nawe, ufikelele apho uya khona. Ngoku kungokuba nobubele emzimbeni wakho. Njani? Kulungile ukuqala Qiniseka ukuba usele amanzi ngokwaneleyo kwaye uthathe ikhefu elifutshane xa uziva udiniwe (iiyure ezi-2 ubuninzi).
Ukulala kakuhle ebusuku kubalulekile. Ngaphandle koko, ixesha lokubuyisela liya kwandiswa ngokungenammiselo, into engekho lula kwaphela. Nangona kunjalo, xa ilixesha lokulala, iJet Lag inokwenza kube nzima ukuba ulale. Kodwa ungakhathazeki, ukuba oku kuyenzeka kuwe, ungathatha ukuphumla infusions kubusuku bokuqala kwindawo oya kuyo. Kwaye i-melatonin inokukunceda nawe.
Ukukhanya kwelanga kudlala indima ebaluleke kakhulu kwiwotshi yakho yangaphakathi, kuthanda ukusebenza kwayo ngokuchanekileyo, ke Phuma phandle uhlambe kwimitha yelanga, ukuba kunokwenzeka kusasa. Yenza umthambo okanye uhambe uhambe.
Ukuzahlula akukhe kube ngumbono olungileyo, ngakumbi kwiimeko apho umzimba nengqondo zakho zingekho sezandleni zabo. Ngoko ke hlalisana, ziphazamise. Ukujikelezwa ngabantu kuya kukunceda woyise iJet Lag kwangoko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » Ijet lag
Indlela yokuthintela isifo seswekile